Vaovao - tariby firavaka volamena sy volafotsy, tariby volafotsy manify sy tariby varahina, izay tsara kokoa
Tariby firavaka volamena sy volafotsy, tariby volafotsy manify sy tariby varahina, izay tsara kokoa
Salama, tongasoa eto amin'ny Shanghai ZHJ Technologies CO., Ltd. tsara kokoa izany raha tsy misy mpitarika ny fitaovana telo.
Ny habetsaky ny tariby varahina ambany dia somary lehibe kokoa, ary ny habetsaky ny haavo matetika dia somary kely ihany, izay hahatonga ny sehatry ny feo mitsangana ho refy telo ary hanana ny mari-pahaizana tsara indrindra;
Ny tariby volafotsy dia manana habe avo be ary matetika ambany. Lehibe ny sehatry ny feo marindrano ary kely ny sehatry ny feo mitsangana. Toa mangarahara izany, ary mora ny mamorona fahatsapana fahagaga eo an-tsofina;
Ny firaka volamena sy volafotsy, matetika 99% volafotsy madio + volamena 1%, manohy ny toetran'ny tariby volafotsy mamiratra sy mangarahara avo lenta, ary ny ambany matetika dia somary latsaky ny tariby varahina, ary kely kokoa noho ny tariby volafotsy, ny vidiny dia betsaka kokoa lafo.
Na dia lafo na mora aza ny vidin'ireto fitaovana telo ireto dia tsy tsara na ratsy ny feo, ka aza miresaka momba ny vidiny amin'ny tariby.
Amin'ny headphones anao ihany, sy ny fahazarana mihaino anao, ao anatin'izany ny fomban'ny hira henoinao isan'andro, dia mifidiana ny tariby mety no safidy tsara. Ilaina ihany koa ny misafidy fivarotana tariby azo antoka hahazoana antoka fa misy ny tena fitaovana sy ny fahaiza-miasa tsara.